कहाँ हराए १० बर्षमा ८ लाख विद्यार्थी ? | Hulaki Online
2021 Mar 02, Tuesday 01:59
कहाँ हराए १० बर्षमा ८ लाख विद्यार्थी ?
संप्रेषण March 15, 2017
चैत्र-२, दश वर्षअघि (वि.सं. २०६४) १३ लाख ३४ हजार १ सय ९५ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए। तिनैमध्ये ५ लाख ३८ हजार १ सय ८२ जनाले चैत ३ बाट सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईमा सहभागिता जनाउँदै छन्। एक दशकको अवधिमा कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बीचैमा हराएको सरकारी तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्छ।